ဟမ်ပီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟမ်ပီရှိ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး အစုအဝေး*
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း i, iii,iv
ဟမ်ပီ အား ဟမ်ပီရှိ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး အစုအဝေး ဟုလည်း ခေါ်ဆိုလေ့ ရှိကြပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာနာတာကာပြည်နယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၄ ရာစုအတွင်း ဟိန္ဒူ ဝိဇယနာဂရ နိုင်ငံတော်၏ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ပါရှားနှင့် ဥရောပခရီးသွားများ အထူးသဖြင့် ပေါ်တူဂီတို့၏ မှတ်တမ်းများအရ ဟမ်ပီသည် တွန်ဂါဘာထရာမြစ် အနီးရှိ ဘုရားကျောင်းများ၊ လယ်ယာများ၊ ကုန်သွယ်သည့်ဈေးများ အများအပြားရှိသည့် ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီး ခမ်းနားသော မြို့တော် တစ်ခု အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၁၅၀၀ ခုနှစ်များသို့ အရောက်တွင် ဟမ်ပီ-ဝိဇယ နာဂရ သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘေဂျင်းမြို့တော်ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး အလယ်ခေတ်မြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့ကာ ထိုအချိန်က အိန္ဒိယ၏ အချမ်းသာဆုံး မြို့ဖြစ်နိုင်ပြီး ပါရှား နှင့် ပေါ်တူဂီမှ ကုန်သည်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဝိဇယ နာဂယ နိုင်ငံတော်အား မွတ်စလင် စူလတန် တပ်ပေါင်းစုမှ အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်း၏ မြို့တော်ကို စူလတန်တို့၏ တပ်များက ၁၅၆၅ တွင် သိမ်းပိုက် လုယက် ဖျက်စီးကြသဖြင့် ထိုစဉ်မှစ၍ ဟန်ပီမှာ အပျက်အစီး အဖြစ်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ 
ကာနာတာကပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ယနေ့ခေတ်မြို့တော် ဟိုဆားပေတေမြို့ အနီးတွင်တည်ရှိသော ဟန်ပီ အပျက်အစီးများသည် ၄,၁၀၀ ဟက်တာ (၁၆ စတုရန်းမိုင်) အတွင်း ဖြန့်ကျက်တည်ရှိပြီး ယူနက်စကိုမှ ဖော်ပြထားသည်မှာ တောင်အိန္ဒိယ၏ နောက်ဆုံး ကြီးကျယ်သော ဟိန္ဒူနိုင်ငံ ၏ "ခံတပ်၊ မြစ်ကမ်းနား တည်ဆောက်မှုများ၊ တော်ဝင်နှင့် မြင့်မြတ်သော အဆောက်အဦးအစုအဝေးများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ နတ်ကွန်းများ၊ တိုင်လုံးများရှိသော ခန်းမဆောင်များ၊ ဝင်ပေါက်တံခါးများ၊ အမှတ်တရ အဆောက်အအုံများ၊ ရေနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားသော အဆောက်အအုံများ" စသည့် ၁,၆၀၀ ကျော်မျှသော အပျက်အစီးများ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ရိုးရှင်းပြီး ခမ်းနားသည့်နေရာ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဟမ်ပီသည် ဝိဇယ နာဂရ နိုင်ငံတော် မတိုင်ခင်ကပင် တည်ရှိခဲ့ပြီး အသောကမင်းကြီး၏ စာများတွင် တွေ့ရသည့်အပြင် ရာမယဏ ဇာတ်နှင့် ဟိန္ဒူ ပူရဏ စာတို့တွင် ပမ်ပါ ဒေဝီ တီသာ သျှတ္တရ ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဟမ်ပီသည် အရေးပါသော ဘာသာရေး နေရာ တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဝိရူပက်ရှ ဘုရားကျောင်း ၊ အဒီရှန်ကာရာ နှင့် သက်ဆိုင်သော ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် မြို့ဟောင်းအတွင်းမှ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများ ရှိသည်။
↑ Group of Monuments at Hampi။ World Heritage။ 20 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Anila Verghese 2002, pp. 1–18
↑ Michael C. Howard (2011)။ Transnationalism and Society: An Introduction။ McFarland။ pp. 77–78။ ISBN 978-0-7864-8625-0။
↑ Nicholas F. Gier (2014)။ The Origins of Religious Violence: An Asian Perspective။ Lexington။ pp. 11–14။ ISBN 978-0-7391-9223-8။ , Quote: "In its peak of glory, ca. 1500, withapopulation of about 500,000 and sixty square miles in area, Vijayanagara was the second largest city in the world behind Beijing."
↑ ၅.၀ ၅.၁ Fritz & Michell 2016, pp. 11–23, backpage
↑ Lycett, Mark T. (2013). "The Fall of Vijayanagara Reconsidered: Political Destruction and Historical Construction in South Indian History 1". Journal of the Economic and Social History of the Orient 56 (3): 433–470. doi:10.1163/15685209-12341314.
↑ John M. Fritz; George Michell; Clare Arni (2001)။ New Light on Hampi: Recent Research at Vijayanagara။ Marg Publications။ pp. 1–7။ ISBN 978-81-85026-53-4။
↑ Joan-Pau Rubiés (2002)။ Travel and Ethnology in the Renaissance: South India Through European Eyes, 1250–1625။ Cambridge University Press။ pp. 234–236။ ISBN 978-0-521-52613-5။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟမ်ပီ&oldid=461694" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၁၉၊ ၁၉:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။